Tafakatra 10 ny tranga, omaly: nisy olona roa indray matin’ny pesta | NewsMada
Tafakatra 10 ny tranga, omaly: nisy olona roa indray matin’ny pesta
Par Taratra sur 19/09/2018
Mitombo ihany ny isan’ny olona maty sy mararin’ny pesta, hatramin’izao. Haingana ny fandraisana an-tanana ka voafehy ny aretina amin’ny toerana itrangany.
Mpivady 42 taona sy 43 taona no matin’ny pesta ao amin’ny tanànan’Ambalatokana, fokontany Alatsinainikely, kaominina Alatsinainikely, distrikan’i Miarinarivo, araka ny vaovao nampitain’ny mpitandro filaminana ao amin’ny poste avancé ao Analavory, omaly. Efa nalevina lavitra ny tanàna amin’ny lavaka mirefy 7 metratra izy mivady, omaly hariva ihany, ho fisorohana ny fiparitahan’ny valanaretina pesta. Ny asabotsy lasa teo no nitaraina ho tsy salama izy mivady fa tsy nanatona tobim-pahasalamana. Omaly tamin’ny 12 ora no nisy niantso ny mpitandro filaminana fa misy mpivady namoy ny ainy ka nidina avy hatrany tany an-toerana ny ekipa, ahitana ny zandary sy ny tomponandraikitry ny CSB ao Alatsinainikely.
Rehefa natao ny fizahana ny razana, voamarin’ny mpiasan’ny fahasalamana fa pesta tokoa no nahafaty azy mivady. Nozahana ireo zanany efatra fa tsy mbola nifindran’ny aretina. Nomena fanafody avokoa ny olona 70 nifampikasoka tamin’ny marary. Norarahana fanafody koa ny trano rehetra manodidina. Nanao fanentanana ny mponina ny mpiasan’ny fahasalamana sy ny zandary amin’ny fitandroana ny fahadiovana tsy hiparitahan’ny fako mitarika ny voalavo.
30 km miala ny poste avancé no misy ity tanàna nitrangan’ny aretina pestaity, hoy ny fanazavana azo. Tranga voalohany niseho tao anatin’ny distrika izao.
Efatra ny olona maty hatramin’ny omaly
Tafakatra 10 izany hatramin’izao ny olona ahina ho voan’ny aretina pesta ka ny efatra no namoy ny ainy tamin’ireo. Ny iray, maty ny 29 aogositra tany amin’ny distrikan’Ankazobe, ny faharoa, tao amin’ny distrikan’Ambalavao, ny 8 septambra lasa teo ary ny roa farany, maty omaly tany Ambalatokana. “Efa nalefa any amin’ny Institut Pasteur de Madgascar ny fitiliana hanamarinana, na pesta mahazo ny tratra no nahazo ireo olona maty roa voalohany ireo”, hoy ny tomponandraikitry ny minisiteran’ny Fahasalamana, omaly. Tany Fandriana, Ambatofinandrahana, Ambositra ny toerana nisy ny marary fa efa sitrana avokoa noho ny fanatonana tobim-pahasalamana ara-potoana. Efa nahazo fanafody sahaza avokoa ny olona 136 nifanerasera tamin’ny marary. Nandeha ny resaka, indrindra amin’ny tambajotra sosialy fa niitatra amin’ny faritra hafa ny aretina pesta any amin’ny faritra Matsiatra Ambony. Nanamafy ny talen’ny serasera fa tsy mbola naharay vaovao momba izay ny minisitera faobe. Nilaza ihany koa ny mpitandro filaminana ao Fianarantsoa fa tsy marina ny vaovao.
Efa misy ny drafitra napetraka ampiasain’ny rehetra any amin’ny faritra avy hatrany, raha misy ny fanahiana tranga. Samy efa mahalala ny tokony hataony avokoa ny rehetra.